Madaxda Sare ee W/Kalluumeysiga Puntland oo Isku Khilaafay Dhaqaalaha Usoo Xarooda Wasaaradda | SAHAN ONLINE
Madaxda Sare ee W/Kalluumeysiga Puntland oo Isku Khilaafay Dhaqaalaha Usoo Xarooda Wasaaradda
Khilaaf muddo soo jiitamayey oo hadda bannaanka usoo baxay ayaa ka Taagan Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Puntland taasoo u dhaxeysa Wasiirka ,kuxigeenkiisa iyo Aggaasimaha guud ee Wasaaradda.
Khilaafka oo salka ku haya qaabka loo maamulo dhaqaalaha lacageed ee Wasaaradda iyo bixinteeda ayaa laga dareemay gudaha Wasaaradda iyo bannaanka taasoo keentay in ay gaarto Madaxweynaha Puntland Dr Cabdiweli Gaas.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Puntland Yaasiin Cali Yuusuf ayaa ku eedeeyey Wasiirka Wasaaradda Cabdinuur Biindhe mid diiday hab saxan in dhaqaalaha lacageed loo maamulo.
“khilaafku waa jiraa ,waa arrin la xiriirta sidii loo maareyn lahaa dhaqaalaha ,waa muhiim mar haddii Agaasime cusub uu yimaado Wasaaradda oo shaqadiisu tahay maamulida dhaqaalaha balse madaxda sare kuguma raaceyso arrintaas.Ayuu
Yaasiin Cali Yuusuf ayaa sheegay in si musuqmaasuq ah loo maareeyey Akoon Wasaaraddu leedahay oo dhaqaalaha lacageed loogu talagalay balse la diiday si sax ah in loo maro.
Waxa uu xusay in nidaamka maamulku yahay mid gebi-ahaanba khaldan loona baahanyahay in sida ugu dhakhsiyaha badan loo saxo si looga dheeraado musuqmaasuq iyo Wax isdaba-marin.
Agaasimaha guud ee Wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka Badda Puntland ayaa cadeeyey in ay jirto lacago ay bannaanka ku qaataan Madaxda sare ee Wasaaradda taasina tahay mid khalad ah.
Madaxweynaha Dowladda Puntland Dr Cabdiweli Gaas oo ay gaartay arrinta khilaaf ee maamulka lacagaha Wasaaradda ayaa looga fadhiyaa xal ka gaaristeeda ,waana arrin si weyn la isula dhexmarayo.
Si kastaba Madaxweyne Gaas ayaa sheegay in sanadkan laga ciribtirayo Puntland musuq-maasuqa lana tayeyn doono Hay’adda asteynta maamulwanaaga iyo la dagaalanka musuq maasuqa.